Yünsüz कसरी लेख्ने? Yünsüz के हो Tdk के हो - कसरी लेख्ने।इन्फो
कसरी Y Writensü लेख्ने
Yünsüz शुद्ध हिज्जे
विश्व इतिहासको सब भन्दा पुरानो र सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चार विधि लेखन हो। कल्पना गर्नुहोस् कि पहिलो दिनदेखि आजसम्म मानिसहरूले लेखेर अरूसँग कुराकानी गर्छन्। एक मेल पठाउन पनि धेरै सजिलो भयो। यदि तपाईंले यसलाई संसारका पहिलो व्यक्तिहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नुभयो भने, तिनीहरूले सायद गम्भीर रूपमा लिने छैनन्।
विशेष गरी the -de र - प्रत्यय को लेखन को बारे मा लगातार हिचक छ। यो स्थिति समाधान गर्न वास्तवमा धेरै सजिलो छ। यदि हामी उदाहरणका साथ वर्णन गर्न सक्दछौं; संयोजन संयोजन –de र –da प्रत्ययहरू अलग लेखिएको छ। त्यसोभए हामी कसरी थाहा पाउँछौं कि यदि यी शब्दहरू संयोजन हो? संयोजनको डे-को पनि यसको आफ्नै अर्थ छ। वाक्यमा पनि पढ्नुहोस् र प्रत्ययहरू बेवास्ता गर्नुहोस्। यदि वाक्यको अर्थ विकृत भयो भने, यो एक अवरोधक प्रत्यय हो। यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र लेख्नुहोस्: बगैंचा अजवाइन। हो, वाक्य भाँचेको छ, त्यसैले यो छेउछाउको छ। यदि अलग -de र -da उपेक्षित गरियो र पढियो भने, त्यहाँ कुनै विरूपण छैन। उदाहरण को लागी: म केहि अलि ढिलो भएको थियो। बन्द गरौं: म करीव ढिला थिएँ। तपाईले यी उदाहरणहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ केहि नमूनाहरु छन्, र हामीले यी बस्तुहरु पछ्याउनु पर्छ।
Woolless को अर्थ के हो?
Yünsüz कसरी लेख्ने?
Spineless हिज्जे गाइड